विज्ञान तथा प्रविधिको महत्व नेपालमा अझसम्म कुनै पनि सरकारले बुझ्न सकेनन् – प्रा. डा. खनाल – साइन्स इन्फोटेक
मार्च 2, 2019 मार्च 7, 2019 साइन्स इन्फोटेक 1 Comment प्रा. डा. उदयराज खनाल, भौतिकशास्त्र, विज्ञान तथा प्रविधि
आजभोलि नेपालमा भौतिकशास्त्रको नाम लिने बित्तिकै प्रा. डा. उदयराज खनालको नाम अग्रपंक्तिमा आउने गर्छ । नेपालमा भौतिकशास्त्रको प्रयाय नै बनेका कम बोल्न रूचाउने खनाल विषयवस्तु सम्बन्धी गहिरो ज्ञानको कारण राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको उपल्लो दर्जाको बैज्ञानिक तथा प्राध्यापकको रुपमा पनि चिनिनुहुन्छ । नेपालमा भौतिकशास्त्रको प्रशस्त सम्भावनाहरू देख्ने प्राध्यापक खनालले भौतिकशास्त्रको व्यवहारीक प्रयोगमा भने प्रशस्तै चुनौती समेत देख्नुहुन्छ । यदि नेपालको विकास गर्ने हो भने सर्वप्रथम विज्ञानकै विकासमा जोड दिनुपर्ने उहाँको मान्यता छ । प्रसिद्ध नोवेल पुरस्कार विजेता भौतिकशास्त्री अब्दुस सलामलाई उद्धृत गर्दै खनाल भन्नुहुन्छ, “भौतिकशास्त्र धनको विज्ञान हो । यदि गरिव मुलुकले भौतिकशास्त्रमा लगानी गरे भने गरिबी निवारणमा धेरै वर्ष कुर्नुपर्दैन ।” तर नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको महत्व अझसम्म कुनै पनि सरकारले बुझ्न नसकेको धारणा राख्ने प्राध्यापक खनालसँग नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधि बर्तमान अवस्था र भविष्य भन्ने गहन विषयमा केन्द्रित रहेर साइन्स इन्फोटेकका प्रधान-सम्पादक गोपाल भण्डारीले गरेको कुराकानी ।
मैले आफुले गर्न सक्ने काम गर्न खोजेको मात्र हो । हामीकहाँ विज्ञानका मुद्दामा कसैले विश्वास गर्दैन । बिगतमा विज्ञान मन्त्रालयमा कसैलाई आकर्षण थिएन । नेतृत्वमा विज्ञान’bout बेखबर मान्छे जान्छ । सही मान्छेले अवसर पाउँदैन । विज्ञानका सभा र सम्मेलन हाम्रा मान्छेहरूलाई विदेश भ्रमणको अर्थमा मात्र सीमित छन् । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको गठनसगै, छलफलका लागि वितरित पुस्तिकामा पनि नेपाल सानो बजार भएको हुनाले विकसित विज्ञान (एडभान्स्ड साइन्स) का अभ्यासलाई प्राथमिकता दिन उपयुक्त नहुने र संसारमा भए गरेका अभ्यास ल्याए पुग्ने विचार प्रकट गरिएको थियो । यस्ता मानसिकता नै विज्ञानको विकासमा तगारो बनेको छ ।
हाम्रो सबैभन्दा दु:ख लागेको कुरा शुरुदेखि नै के हो भने हाम्रो समाजमै र नेताहरुले विज्ञानको महत्व नै बुझेनन् । त्यसैले गर्दा वैज्ञानिकहरु नै गलत वाटोमा हिड्यो कि भनेर लेखे ’cause विज्ञान बुझाउन नसक्नु वैज्ञानिहरुले नै त्यसको दोष लिन सक्नुपर्छ त्यसमा पनि धेरै विरोध भयो । अब पनि हाम्रो विकास उच्चस्तरीय विज्ञान तथा प्रविधिबाट मात्र सम्भव छ । विज्ञान बिनाको विकास दिगो हुन सक्दैन । हाम्रो देशका नेताहरुले नै विज्ञानको महत्व नबुझेको जस्तो लाग्छ । विज्ञान तथा प्रविधिको महत्व नेपालमा अझसम्म कुनै पनि सरकारले बुझ्न सकेनन् ।
प्रयोगशाला भनेर कुरा नबुझी रहेको छ जस्तो लाग्छ । अमेरिकामा पनि राष्ट्रिय प्रयोगशालाहरु छन् तर त्यो के गरिरहेको छ भने ४/५ वटा विश्वविद्यालयहरुलाई तिमीहरुको जिम्मा भनेर समुहहरुलाई दिएको छ । यो विश्वविद्यालयवाट छुट्टै प्रयोगशाला बनाउने भन्ने एक किसिमले पुरानो सोभियत यूनियनको परिपाटी जस्तो भयो र त्यसैमा भारत पनि लाग्यो । लाग्नलाई भारतका वैज्ञानिहरुसंग अन्तरक्रिया गरे उनीहरुको कुरा बुझ्दाखेरी उनीहरुको विश्वविद्यालयवाट छुट्याएर छुट्टै प्रयोगशालाहरु बनाउँदाखेरि झन त्यहाँका वैज्ञानिकहरु आइसोलेसनमा गए जस्तो अनुभव भयो । अब राष्ट्रिय प्रयोगशालामा काम गर्नेलाई पैसा धेरै दिन्छ त्यसैले त्यतैतिर लाग्छन् र त्यसैले सम्बन्ध नै कुहिन थालेपछि त्यति उत्पादक भएको देखिदैन । यस सन्दर्भमा पहिला मेगनाथ शाहले भनेकै थिए यो प्रयोगशाला बनाउन थालेपछि हामीले यो विज्ञानलाई एउटा ताजमहल जस्तो बिल्डिङभित्र लगाएर गाड्दिन लागेको हौ भनेका थिए ।
यसको लागि धेरै अनुभव चाहिन्छ । एकैचोटी गरेर हुने कुरा पनि होइन । यो आणाविक विज्ञानको ’boutमा अन्य विकसित देशहरुले अरुलाई सिकाउनै चाहादैनन । त्यसैले आफैले अनुभव बटुल्दै जानुपर्छ । सकिन्छ कसरी शुरुवात गर्ने कहाँवाट गर्ने त्यो विचार गरेर गर्नुपर्छ ।
नोबेल पुरस्कार बिजेता पाकिस्तानी नागरिक अब्दुस सलाम ‘विज्ञानको उपयोग गरेर नै गरिबीको उन्मूलन हुन्छ’ भन्दथे । भौतिकशास्त्रलाई उनले ‘धनको विज्ञान’ रूपमा व्याख्या गरेका थिए । यदि गरिव मुलुकले भौतिकशास्त्रमा लगानी गरे भने गरिबी निवारणमा धेरै वर्ष कुर्नुपर्दैन। सामन्त युगमा धनको लुटले सामन्तको जन्म गराउँदथ्यो तर उपनिबेशकालमा गरिब देशहरूबाट सुन र हिरा लुटेर धनी भइन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । अहिलेको वैज्ञानिक युगमा भने ज्ञान र विज्ञानको प्रयोगले धनको उत्पादन गर्न सकिने धारणा विकास भयो र सलामले विस्तार गरेको त्यो मान्यता अहिले प्रमाणित भइसकेको छ ।
१०. नेपालमा अझसम्म विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गर्न सक्रिय मन्त्रालय र अन्य सरकारी संस्थाले सक्षम नेतृत्व पाउन सकेको छ वा छैन ?
मैले भन्दा मान्छेहरू रिसाउने गर्छन्, फेरि पनि रिसाउलान् । तर कटुसत्य के हो भने अन्य सबै क्षेत्रमा जस्तै नेपालमा अझसम्म विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गर्न सक्रिय सरकारी संस्थाले सक्षम नेतृत्व पाउन सकेको छैन । राजनीति छिरेको छ । सलामले भनेको सम्झन्छु : ‘विज्ञान प्रविधि क्षेत्रको नेतृत्व क्रियाशील वैज्ञानिक (वर्किङ साइन्टिस्ट) ले नै गर्नुपर्छ ।’ हात मैलो होला भन्ने मानिस वैज्ञानिक हुन सक्दैन । उसले त सधैं प्रयोगशालामा चलिरहनुपर्छ । नेतृत्व गर्नेले त्यसैगरी अरूलाई पनि गराउन सक्नुपर्छ । टेबल कुरेर, फाइलमा घोरिएर हुन्न । नेतृत्वको कुरा गर्दा महान् भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ शाहको कुरा आउँछ । दिल्ली विश्वविद्यालयमा म आफ्नो पीएचडीको शोध प्रतिरक्षा गर्न जाँदा त्यहाँका प्राध्यापकहरूले भनेका थिए, ‘हामीकहाँ पनि शाहकै कारणले मात्र विज्ञान यो अवस्थामा छ ।’ शाह त्यस्ता वैज्ञानिक हुन् जो बंगालबाट चुनाव लडेर सभासद बने, अनि संसद्मा पुगेर देशका लागि आवश्यक विज्ञान प्रविधिसम्बन्धी नीति पास गराए ।
वैज्ञानिक भनेको एउटा सोचाई र संस्कार हो । सोचले विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्ने बाटो खोल्दिने गर्छ । भएका जतिलाई विज्ञान मान्ने हो भने अहिलेसम्म सबै विकसित भएका पढेर, जानेर, बुझेर ’emलाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । वैज्ञानिक भनेको सोच हो । मुख्य कुरा के हो भने केहि काम गरेर सिक्ने उपाय हो । विज्ञान भनेको केहि काम गर्यो त्यसले राम्रो नतिजा दियो भने त्यसलाई नै राम्रो गर्दै जाने हो । त्यो तरिकाले काम गर्दैन भने केहि कुरा त परिवर्तन गर्नुपर्छ यसरी हुँदैन रहेछ । यहाँ औंजार परिवर्तन गर्नुपर्दो रहेछ भनेर खोज्दै जाने प्रक्रिया नै विज्ञान हो जस्तो लाग्छ । त्यसैले यो सामाजिक रुपमै हो पढेर जानेर मात्र हुदैन । विज्ञानले निरन्तर र व्यापक अन्तक्रिर्या र अभ्यास खोज्छ ।
यो पनि हाम्रो समाजमा सानादेखि नै अस्तव्यस्त छ । अब गाउँघरमा कति अन्धविश्वासका कारणले कतिलाई वोक्सीको आरोप लगाएर हत्या र यातना दिएका घटनाहरु दिनदिनै सुनिरहेका हुन्छौं । भारतमा के छ भने वैज्ञानिकहरुको एउटा समूह नै छ । उनीहरुले सामहिक रुपमा गाउँगाउँमा गएर जादुगरहरुले गरेका नराम्रो कामहरु खोज्दै हिडेर कतै देखियो भने उनीहरुले जनचेतना कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । अव समाजमा भएका अन्धविश्वास हटाउन ’emको कारण खोजी पुस्तक प्रकाशन गरी त्यसको प्रचार-प्रसार एफएम, रेडियो र टेलिभिजनहरुमा हुन् जरुरी छ ।
← दही र मोहीका फाइदाहरु
आयुर्वेदिक वृक्ष अशोक र यसका फाइदाहरु →
सातौँ राष्ट्रिय विज्ञान दिवस २०७६ को ’boutमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना
One thought on “विज्ञान तथा प्रविधिको महत्व नेपालमा अझसम्म कुनै पनि सरकारले बुझ्न सकेनन् – प्रा. डा. खनाल”